Goynta Board, Charcuterie Board, Sahayda jikada - Style Bridge
Qabanqaabiyaha Qabanqaabiyaha Dabiiciga ah
Qabanqaabiyaha Qabanqaabiyaha Madow
Qabanqaabiyaha Jumlada Maacuunta Weelka Qabanqaabiyaha, Bam ...
Bridge Style Bamboo Jarida Tray Jikada Utensi ...
Fujian Bridge Style Furnishings Co., LTD waa shirkad e-commerce diirada saareysa BAMBOO iyo alaabooyinka wax soo saarka macaamiisha ee WOOD oo leh alaabooyin ka kooban dhowr nooc oo wax soo saar, oo ay ku jiraan Hoyga & Jikada, Beerta & Bannaanka, Sahayda xayawaanka iyo Waxyaabaha Xafiiska. Shirkaddu waxay alaabteeda siisaa ugu horreyn kuwa iibiya Amazon ee ku kala baahsan Waqooyiga Ameerika iyo Yurub.
Kadib toban sano oo horumarineed, warshaddeeda oo si buuxda loo leeyahay waxay dabooshaa 8000 mitir murabac oo waxaa lagu caddeeyay BSCI, FSC, ISO9001. 10-kii sano ee la soo dhaafay, nidaamka xakamaynta tayada adag iyo adeeg aad u fiican ayaa awood u siinaya Fujian Bridge Style Furnishing Co., Ltd inay u adeegto in ka badan 1000 iibiya Amazon isla markaana ilaaliya iskaashi ganacsi oo muddo dheer soconaya isla markaana faa'iido leh.
Waxaan alaabta oo dhan ku soo dari doonnaa bakhaarkeenna, ka dibna waxaan ku sameyn doonnaa baaritaan tayo leh bakhaarkeenna, waxaanan ku siin doonnaa warbixin kormeer xirfadeed leh. Haddii aad iibsato muunadda, waxaan kaliya bilaabi doonnaa wax soo saar ballaaran kadib xaqiijintaada. Faahfaahinta waxay lamid tahay yo muunada yo ...
Shiinaha Bamboo Jikada Jumlo - Xulo 2021 alaab tayo sare leh oo bamboo Bamboo ah qiimaha ugu wanaagsan ee laga helo soo-saarayaasha Hirgelinta Jikada ee Shiinaha. Bridge Style waxay bixisaa shey naqshad gaar ah: Abaabulaha Bamboo Qabanqaabiyaha Bamboo goynta goynta Bamboo server charcuterie farmaajo & nb ...
Seddex jeer lacag celin muunad ah & $ ...
Style Bridge Abuur Dhiirrigelin Cusub: 1.Ku soo celi lacag celin 3 jeer ah tusaale tijaabo ah (marka laga reebo ujrada dhoofinta). 2.Waxaa lagaa dhimaa $ 100 shey kasta. Waad dooran kartaa mid ka mid ah waxqabadyada kor ku xusan sabuuradda goynta bamboo / habeeyaha bamboo / sabuuradda baasaboorka charkuterie / qalabka jikada / bamboo / keydinta guriga